Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ emelitere » Ebe pasent 90 nke igbukpọsị osisi zuru ụwa ọnụ sitere
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ emelitere
Akụkọ njem n'ịntanetị
Ọrụ ugbo ka bụ isi ihe na-akpata igbukpọsị osisi na mpaghara niile ewezuga Europe, ebe mmepe obodo na akụrụngwa na-enwe mmetụta dị elu, ka ọmụmụ kwuru. Ntugharị gaa n'okirikiri na-achịkwa oke ọhịa dị n'Africa na Eshia, ebe ihe karịrị pasenti 75 nke oke ọhịa tụfuru ghọọ ala ubi. Na South America, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụzọ atọ n'ụzọ anọ nke igbutu osisi bụ n'ihi ịta anụ ụlọ.
Mgbasawanye ọrụ ugbo na-ebute ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ pasent 90 nke igbukpọsị osisi zuru ụwa ọnụ - mmetụta dị ukwuu karịa ka e chere na mbụ, Òtù Na-ahụ Maka nri na Ọrụ Ugbo nke United Nations (FAO) kwuru mgbe ha na-ewepụta nchoputa mbụ nke nyocha ọhụụ zuru ụwa ọnụ taa.
Ikpochapụ osisi bụ ntụgharị nke oke ọhịa gaa na ala ọzọ, dịka ọrụ ugbo na akụrụngwa. Gburugburu ụwa, ihe karịrị ọkara nke mfu ọhịa bụ n'ihi ntụgharị nke oke ọhịa gaa n'ubi, ebe ịta nri anụ ụlọ na-akpata ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ pasent 40 nke mfu ọhịa, dịka nchọpụta ọhụrụ ahụ siri kwuo.
Ihe omuma ohuru a gosikwara na mbelata nke igbutu oke ohia zuru uwa dum ebe o na-adọ aka na ntị na oke ohia mmiri ozuzo, karia, na-enwe oke nrụgide site na mgbasawanye nke ugbo.
Dị ka FAO si ọhụrụ Global Forest Resources Assessment anyị atụfuru ọhịa 420 nde hectare kemgbe 1990," FAO Director General QU Dongyu kwuru taa n'okwu a kwadebere maka 26th UN Climate Change Conference of the Parties' (COP26) ọkwa dị elu. mkparita uka nke isiokwu ya bu "Mme omume na-abawanye elu iji gbanwee ebili mmiri na igbutu osisi" ebe FAO weputara nchoputa ohuru a. Iji mezuo nke a, o kwusiri ike na ịba ụba mmepụta nri agri-nri iji gboo mkpa ọhụrụ nke ọnụ ọgụgụ na-eto eto na ịkwụsị igbutu osisi abụghị ihe ebumnobi na-ekewaghị ekewa.
Ịtụgharị ebili mmiri na igbutu ọhịa na ịkwalite ọganihu ndị siri ike meriri n'ihu a bụ ihe dị oké mkpa iji wuliteghachi nke ọma na ọrịa ọrịa COVID-19, Qu kwukwara.
Iji nwee ihe ịga nke ọma n'ọrụ dị otú ahụ, anyị kwesịrị ịma ebe na ihe kpatara igbutu osisi na mbibi nke ọhịa na-eme na ebe ọ dị mkpa ka a rụọ ọrụ ahụ, Onye isi nchịkwa kwuru, na-ekwupụta na a ga-enweta nke a nanị site na ijikọta ihe ọhụrụ nkà na ụzụ ọhụrụ na ọkachamara mpaghara na ala. . Nyocha ọhụrụ ahụ na-eje ozi dị ka ezigbo ihe atụ nke ụzọ dị otú ahụ.
Ịbawanye mmepụta nri agri-nri iji gboo ihe ọhụrụ nke ọnụ ọgụgụ na-eto eto na-akwụsị igbutu osisi abụghị ihe ebumnobi na-ekewaghị ekewa. Ihe karịrị mba iri abụọ na-emepe emepe egosila na ọ ga-ekwe omume ime ya. N'ezie, data kachasị ọhụrụ na-akwado na ibelatala igbutu osisi nke ọma na South America na Eshia
A nọ n'oké egwu
Dị ka data ọhụrụ ahụ si kwuo, na 2000-2018, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke igbutu osisi mere na biomes okpomọkụ. N'agbanyeghị mbelata nke igbutu osisi na South America na Eshia, oke ọhịa mmiri ozuzo na mpaghara ndị a na-aga n'ihu na-edekọ ọnụ ọgụgụ kacha elu nke igbutu osisi.
Ndị na-anya igbutu osisi dị iche iche na mpaghara ụwa niile
A na-eduzi ọmụmụ ihe FAO site na iji data satịlaịtị na ngwaọrụ ndị emepụtara na mmekorita ya na NASA na Google, yana mmekorita ya na ihe karịrị ndị ọkachamara mba 800 sitere na mba 130.
Mkparịta ụka nke ọkwa dị elu kpọkọtara ndị isi na ndị isi nke otu mmekorita na-arụkọ ọrụ ọnụ na oke ọhịa iji wulite ume na omume ihu igwe dabere na oke ọhịa n'okpuru atụmatụ odeakwụkwọ ukwu nke UN na ịtụgharị Tide na igbutu ọhịa. Ihe omume a ga-abụkwa nnukwu onyinye maka nzukọ Stockholm + 50, nnọkọ nke iri na asaa nke United Nations Forum on Forests (UNFF17) na nyocha miri emi nke SDG17 (Life on land) site na Ụlọ Nzukọ Ọchịchị dị elu na Sustainable. Mmepe (HLPF) na 15.
Ọrụ FAO na-akwụsị igbutu osisi
N'ịtụle ọtụtụ njikọ dị n'etiti oke ọhịa, ọrụ ugbo na nchekwa nri, usoro atụmatụ FAO ọhụrụ ga-eduga mbọ iji gbanwee usoro nri agri ka ọ bụrụ nke ọma, na-agụnye, na-agbanwe agbanwe na nke na-adigide.
Ya na UN Development Programme (UNDP) na UN Environment Programme (UNEP), FAO na-akwado ihe karịrị mba 60 na mmejuputa atumatu iji belata ihe ọkụkụ sitere na igbutu osisi na nbibi ọhịa site na UN-REDD.
FAO na-ejikwa UNEP na-eduzi afọ iri na mweghachi nke gburugburu ebe obibi, ohere dị mkpa iji mee ka echiche ọhụrụ dị ngwa n'ime omume dị oke egwu.
Ọzọkwa, nzukọ UN Food Systems Summit na nso nso a hiwere njikọ n'etiti mba ndị na-emepụta ihe na ndị na-azụ ahịa, ụlọ ọrụ na òtù mba ụwa iji kwụsị igbutu osisi na mmetụta gburugburu ebe obibi na-emerụ ahụ nke ịtụgharị ala iji mepụta ngwa ahịa ugbo.
Mmekọrịta mmekọrịta na oke ọhịa, nke FAO na-edu, na-ejikọta otu mba ụwa 15, na-emepụta atụmatụ nkwonkwo iji gbanwee Tide na igbukpọ osisi iji mee ka omume dịkwuo elu na ịkwalite mmetụta.